Nahazo Vidéo projecteur – FJKM Ambavahadimitafo Nahazo Vidéo projecteur |
Nahazo Vidéo projecteur
Publié le 23 avril 2009 à 12:04
Nandritra ny dian’ny mpitandrina Dr Rakotoharintsifa Andrianjatovo tany andafy dia nisy ny antso natao momba ny fitadiavana Vidéo projecteur.
Lehibe tokoa Andriamanitra satria nisy havantsika any andafy any nanolotra an’izany Vidéo projecteur izany, izay efa hetaheta efa hatry ny ela tokoa raha ny teto amin’ny fiangonana.
Fitaovana sarobidy sy lafo vidy tokoa izany. Izy io moa dia fitaovana ampiasain’ny mpitandrina amin’ny fampianarana sy ny conférence izay fanaony matetika. Nefa miasa betsaka koa izy io amin’ny hetsika maro izay ataon’ny fiangonana (ohatra Alahady 05 avril 2009)